आज मार्च २७ तारिख मंगलबारको ‘मेरीबास्सै’ हेर्नुभयो ? नहेरेको भए यहाँ हेर्नुस ! – पुरा पढ्नुहोस्……
आज मार्च २७ तारिख मंगलबारको ‘मेरीबास्सै’ हेर्नुभयो ? नहेरेको भए यहाँ हेर्नुस !
आज मार्च २७ तारिख मंगलबारको ‘मेरीबास्सै’ हेर्नुभयो ? नहेरेको भए हेर्नुस ! भिडियो हेर्न सिधै तल जानूहोला !!
Prevगाई काटेर मासु खानु भनेको हिन्दू धर्मालवम्बीको आस्थामाथि हमला हो : डा. शेखर कोइराला
Nextआजको भिडियो हेर्नुहोस् : मनपरी पैसा लिने औषधी पसल १५ मिनेटमा बन्द । तस्करीका विषयमा बोल्दा बोल्दै अर्काे तस्करी !
डलरको भाउ घट्यो, साउदी, कतार दुबई , मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउमा पनि ठुलो असर .. हेर्नुहोस आजको बिदेसी मुद्राको विनिमय दर…
यि हुन अस्ट्रियामा आफ्नै तीन स,न्तानको ज्या ,न लिने आमा..
‘गोरे’लाई सिधाकुरा: ‘सबैको नाम मात्र खोलिदेउ, इतिहासमा सुनकै अक्षरमा तिम्रो नाम लेखिनेछ’ -रवी सिधाकूरा
दिक्तेलमा बाँदर धपाउने मिटिङमा बाँदरनै उपस्थित भएपछी। पूरा खबर हेर्नुहोस